Iapile kunye neeapos zomoya zibethe ixabiso elitsha ngalo lonke ixesha kwisivumelwano sokuphamba (esihlaziyiweyo)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iapile kunye neApos; ii-AirPods Pro zibethe ixabiso elitsha ngalo lonke ixesha kwisivumelwano esiphambeneyo (esilungisiweyo)
Iapile kunye neApos; ii-AirPods Pro zibethe ixabiso elitsha ngalo lonke ixesha kwisivumelwano esiphambeneyo (esilungisiweyo)
Amaxabiso ahlala exabiso ngokuxabisa i-249 yeedola (ngakumbi kuthathelwa ingqalelo iminyaka yabo yobudala), eyona nto ithengiswa kakhulu ephezulu ye-earbuds ezingenazingcingo emhlabeni ziye zafumana izaphulelo ezininzi kwiinyanga ezidlulileyo kuzo zombini imeko entsha kunye nehlaziyiweyo.
Okumangalisayo kukuba, iiAmazon & apos; phezulu Isivumelwano seAirPods ngoSuku lweNkulumbuso ngo-2021 iveki ephelileyo yayikude nokungenakuphikiswa, nangona uWoot wazama ukuyilungisa ngokukhawuleza ukubiza imali eyi- $ 170.99 isibini esitsha, esingasetyenziswanga, esingavulwanga, kunye nesingonakaliswanga ngala makhwenkwe mabi anewaranti yonyaka opheleleyo ebandakanyiweyo.
Akumangalisi ukuba loo nto ibambekayo ayizange ihlale ixesha elide, kodwa ezo ndawo apho iWalmart ingena khona ngoku, ikuvumela ukuba uhlawule nangaphantsi ... ngeeyunithi zeAirPods ezihlaziyiweyo. Ngokubalulekileyo, khawukhathalele, kwaye enyanisweni, le isenokuba yeyona nto ibalulekileyo yakha yanikezelwa ngumthengisi ophambili wase-US.
I-Apple AirPods Pro
Iinyani ezingenantambo zeendlebe ezinokurhoxiswa kwengxolo esebenzayo, ezihlaziyiweyo
$ 114 isaphulelo (46%)$ 135 yeedola ezingama-249Thenga kwiWalmart
Ngokobuchwephesha, nangona kunjalo, umrhwebi weqela lesithathu ogama linguVIPOutlet eneneni ulawula ukuthengisa kunye nokuthumela izinto apha kuneWalmart, kodwa irekhodi layo lomkhondo liqinile. Imiqathango yewaranti nayo ayikacaci, nangona ezinye iindlela zokunyusa ezidlulileyo zingabonakaliswa, kuya kufuneka ugqunywe iintsuku ezingama-90 ubuncinci ngokuchasene neziphene kunye neziphene.
Ngaphandle koko, umgaqo-nkqubo wokubuyisa ucacisa gca ukuba ungayifumana imali yakho kwiintsuku ezingama-30 zokuhanjiswa komthengisi ukuba awonwabanga yindlela ojonga ngayo okanye osebenza ngayo.
Kananjalo, awunabungozi kakhulu ukuba ukhetha ukuhlawula nje i-135 yeedola kwezinye ze Ezona ndlebe zintle zingenazingcingo ziyafumaneka ngo-2021 . Ewe kunjalo Ii-AirPods 3 zinokuza ngokukhawuleza , kodwa kukho into esixelela yona apile Imodeli elandelayo ye-gen-non-Pro ayizukukwazi ukunkqonkqoza i-AirPods Pro ngaphandle koluhlu lwanamhlanje lweapos ezona ndlebe zinkulu zingasebenzi ngocingo .
I-iphone 11 pro max kufanelekile
Eyona pokemon ihamba kakuhle kwi-ios
UGoogle wazisa izitikha zeSelfie kwiGboard -jikisa ubuso bakho bube yi-emoji
Dibana neBeats Studio Buds: ukurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo kunye ne- $ 149
I-Verizon-kuphela i-Asus ZenFone AR inokuba isazisa eMelika ngomso
I-Apple iPhone SE TouchID iyafana nakwii-5s, icotha kune-iPhone 6s yeminwe yeminwe
Uthotho lwee-Apple 1 zoVavanyo
I-Verizon ngoku inikezela ngemini efanayo yokulungiswa kwescreen kunye nesiCwangciso sayo soKhuseleko seSelfowuni
I-PlayStation 5 yokuthengisa kwakhona, kwiAmazon, iWalmart, iGameStop, okanye iThagethi
I-PUBG Iselfowuni ifumana umbono womntu wokuqala, ixesha leRoyle Pass le-1 kuhlaziyo lwamva nje
Ukuprintwa kunye noVavanyo